RASMI: Natiijada Baadhitaankii Ugu Dambeeyey Ee Fayraska Korona Ee Premier League Oo La Shaaciyey - Miyay Jiraan Ciyaartooyo Cusub Oo Laga Helay? - Gool24.Net
RASMI: Natiijada Baadhitaankii Ugu Dambeeyey Ee Fayraska Korona Ee Premier League Oo La Shaaciyey – Miyay Jiraan Ciyaartooyo Cusub Oo Laga Helay?
Maamulka horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa soo bandhigay natiijada wareeggii afraad ee baadhitaanka caabuqa Korona ee lagu sameeyey ciyaartoyda kooxaha.
Premier League waxa uu sheegay in maalmihii Khamiistii iyo Jimcihii la bilaabay wareegga afraad ee baadhitaanka lagu hubinayo caafimaadka ciyaartoyda ka hor inta aan la ogolaanin inay si is-dhex-gal ah u sameeyaan tababarka, waxaana dheecaanno laga qaaday 1,130 ciyaartoy iyo shaqaale iskugu jira oo ka kala tirsan 20ka kooxood ee horyaalka Premier League ka kooban yahay.
Saddex baadhitaan oo hore ayaa lagaga helay caabuqa 12 qof oo iskugu jiray ciyaartooyo iyo shaqaale, waxaanay tiradaasi ahayd mid lagu bilaabi karayo ciyaaraha oo aan cabsi badan abuuraynin, hase yeeshee wareegga afraad oo caawa natiijadiisa la shaaciyey ayaa waxay kalsooni buuxda siinaysaa ciyaartoyda, tababareyaasha iyo shaqaalaha kala duwan.
Horyaalka Premier League oo la shaaciyey inuu si rasmi ah u bilaabmi doono June 17, ayaa la qorsheeyey in toddobaad kasta laba jeer baadhitaan lagu sameeyo ciyaartoyda iyo shaqaalaha, si loo ilaaliyo caafimaadkooda.
War-saxaafadeed kasoo baxay maamulka Premier League ayaa lagu sheegay in baadhitaankii Khamiistii iyo Jimcihii laga qaaday 1,130 ciyaartoy iyo shaqaale ah, aan gebi ahaanba laga helin cid qabta caabuqa oo ay wada caafimaad qabanaa.
“Premier League waxa uu maanta xaqiijinayaa in Khamiistii 28 May iyo Jimcihii 29 May, lagu sameeyey baadhitaanka caabuqa Koofid-19, 1,130 ciyaartoy iyo shaqaale ah, mana jiraan cid laga helay caabuqa.” Ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka Premier League.
Maamulka horyaalku waxa kale oo uu sheegay inay si aanu madmadow ku jirin oo hufnaan ah usoo bandhigi doono natiijooyinka baadhitaannada shaqsiga ah ee ciyaartoyda iyo shaqalaha, si sumcadda horyaalka iyo taam ahaanshaha ciyaartoyda iyo shaqaalaha loo sugo.
Natiijadan ayaa waxay abuuraysaa kalsooni badan oo ay ciyaartoyda iyo shaqaalihii walaaca caafimaad qabay ay si niyad-samaan ah ugu soo laaban karayaan garoomada, iyadoo horyaalka loo muddeeyey in June 17 ay foodda isku daraan kooxaha Manchester City vs Arsenal iyo Aston Villa iyo vs Sheffield United oo kulamadoodu hore baaqi u ahaayeen.
Marka laga yimaaddo afartan kooxood, dhamaan kooxaha kale ayaa waxa mid walba u hadhsan min 9 ciyaarood, waxaanay tobanka kulan oo dhamaystiran ay dhici doonaan afar maalmood oo isku-xiga oo ah June 19 illaa June 22.
Kooxda Liverpool oo hoggaanka 25 dhibcood ku haysa, ayaa labada ciyaarood ee ugu horreeya ay u go’aamin karaan inay ku guuileysato horyaalkeedii Premier League ee ugu horreeyey muddo soddon sannadood ah.
Si kastaba ha ahaatee, dhamaan ciyaarahan ayaa waxa lagu dheeli doonaa garoomo madhan oo aanay wax taageereyaal ahi iman doonin, hase yeeshee waxay taageereyaashu bilaash kaga daawan doonaan telefishannada kala duwan ee markii hore lacagta ka qaadi jiray.